Shiinaha soosaarayaasha iyo alaab qodayaasha Shiinaha Mashiinka Dongheng
Noocyada qodista yar
APRON WHEEL Kordhinta-NOOCA
KHILAAFKA SARE EE SARE
NADIIRKA SALAYSANKA SALIIDDA SARE
Intaa waxaa dheer, qaababka aan daaqadda lahayn ayaa si wanaagsan loogu qaabilay macaamiisha Yurub iyo Ameerika.
Qodobo yaryar oo jilaaga ah oo loo yaqaan 'KINGER mini crawler excavator' waxaa lagu soo saaray qaabeyn sarreysa Waxay ku bixisaa awood iyo waxqabad qiyaastiisu dhan tahay si ay kaaga caawiso inaad ka shaqeyso codsiyada ugu adag. Marka loo eego shuruudaha shaqada ee kala duwan, macaamilku sidoo kale wuxuu ka dooran karaa qalabka lifaaqa kaladuwan ee kala duwan waxyaalaha ku jira lifaaqyada 'KINGER', sida dhulka auger, qalabka wax kala gooya, qalabka xarkaha, qalabka wax lagu duubo, iskuxirka degdega ah iwm.
Iyadoo NACHI bamka Haydarooliga iyo mootada leexashada, PTM socodka socodka,Yanmar Mashiinka,KYB Qiimaha qaybinta, qodistayaasheena yar yar ee 'KINGER' waxay waxqabad wanaagsan kaqabtaa xaalado badan oo shaqo sida dhismaha beeraha iyo isbadalka magaalooyinka.
Haddii amarku yahay 1pc, waxaan alaabada u geyn karnaa dekedda Qingdao 25 ​​maalmood gudahood ka dib marka la helo lacagta. Haddii ka badan 5 kumbuyuutar, fadlan nala soo xiriir si aan u geyno waqti dheeri ah. Waxaan sidoo kale ku geyn karnaa badeecadaada dekedda aad u baahan tahay.
Waxaan nahay soo saaraha dhismaha xirfadle in ka badan 11 years.All wax soo saarka our hesho foomka CE iyo shahaadada ISO tayo sare leh oo deggan. Intaa waxaa dheer, waxaan aqbalnaa OEM.
Waxyaabaha kor ku xusan waa qeexitaankeena qotodheer iyo qaabeynta tixraacaaga Su'aal kasta oo lagu soo dhaweynayo nala soo xiriir. Waxaan isticmaalnaa dhammaan matoorro tayo sare leh oo la soo dejiyo, mashiinka iyo mashiinka iwm.
Xiga: Dhagxaanta Rock